मदिरा मोह | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 04/10/2011 - 08:33
"मामा ए मामा !"
कता कता तन्द्रामा बोलाएझैं लाग्ने यो आवाजले झस्काउँछ लगभग ५५ वर्षीय बिदुर पाण्डेलाई । ऊ निद्रादेवीसँग बिदा माग्दै तातो डबल-बेडको पलङ्बाट सकी-नसकी आफ्नो गणेश जस्तो शरीरलाई बलजफ्ती थाम्दै उठ्न खोज्छ ।
"मामा ए मामा ! हैन यतिका बेरसम्म भैसक्यो । अँझैं जाने सुरसार छैन?" फेरि उही च्याँठिएको स्वर बिदुरको कानमा ठोकिन आइपुग्यो ।
ऊ हतार हतार उठेर झ्यालबाट टाउको निकाल्दै आगन्तुकलाई नियाल्ने प्रयास गर्छ, "को ? भान्जा हो?"
"हो नि, म राम भान्जा के त । हिजोको रमले अझैं छाडेको छैन कि क्या हो ?"
आजकल मामा भान्जा हुन साख्खै हुन पर्दैन ।
"को नै भनेको त यो पो रहेछ । आइज माथि नै । " यति भनिसक्दा बिदुर फेरि त्यहि ओछ्यानमा गएर गजधुम्म शरीरलाई गर्ल्याम्म ढालिसक्छ ।
भान्जाको आगमन माथिल्लो कोठामै हुन्छ । मामा ओछ्यानमै पूर्ववत अवस्थामा लडिरहेको हुन्छ ।
"यी मामा पनि । झन हिजै त्यति भनिसकेपछि त । जाऊँ, कति सकेको सुत्न?" टुसुक्क नजिकैको मुढा तानेर आफूलाई अड्याउदैँ भान्जा फलाक्न थाल्छ ।
मामा बडो असमञ्जमा पर्छ ।
"आज त म जान्न भान्जा तिमी जाऊ । हेर न कति दिन भैसक्यो अफिस नगएको । अब त जागिर नै फुस्किन्छ मेरो त ।" मामा बडो गम्भिर मुद्रामा आफ्नो गाम्भीर्यता प्रस्तुत गर्न खोज्छ ।
साँच्चै नै, बिदुर अफिस नगएको लगभग ९ दिन भैसकेको थियो । यो प्रथम पटक भने हैन । बिदुरमा त्यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक अफिस (स्कुल)मा अनुपस्थित रहने अभ्यस्त बानी थियो भन्दा अनुचित नहोला । किनकि, ऊ अघिल्लो वर्ष मत्रै ७ पटक कारवाहीमा परिसकेको थियो ।
पेशाले सरकारी स्कुलको मास्टर, बिदुर, जातले ब्राम्हण हो । तर खै कसरी कसरी पिउने बानीले झ्वाप्पै छोपेको थियो । जुन लत छुटाउन परिवार एवं शिक्षक साथीहरूले धेरै प्रयास गरेका थिए ।
बिदुरको यो अभ्यासले एकापट्टि स्कुल परिवार मारमा परेका थिए भने अर्कोपट्टि स-साना नानीहरूले आफ्ना केही सिक्ने अवसरहरू गुमाउनु परेको थियो ।
साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा बिदुरमा एउटा असल शिक्षकमा हुनुपर्ने गुणको तुलनामा अवगुण बढी भेटिन्थ्यो । (आजकल मतवाली जातले मात्रै नभएर मदिरापान अन्य जातीले पनि गरेको पाईन्छ । )
"हैन तपाईंलाई कसले नजानुस भनेको छ र? आज एक दिन मात्रै त हो नि । त्यो पनि नवराजकोमा ब्रतबन्धको निम्तो भएकोले पो त । कसैले नखाएको जागिर ।" भान्जा अलिक मै हुँ भन्ने पारामा मामालाई घुर्की देखाउँदै भन्न थाल्छ ।
बिदुरलाई याद छपछिल्लो शनिवार मात्रै साथीको छोराको बिहेमा गएको । त्यस दिन अलि बढी नै पिएछ कि क्या हो अडिनै नसक्ने भएका थियो । त्यसो त उसले त्यसभन्दा लगभग १ महिना अगाडिदेखि नै रक्सी पिउन छाडेको थियो । साथीभाइ जमघट भएको मौकामा केको स्वाँङ् भन्दै साथीहरूले चिढ्याउन थालेपछि एक प्याग लगाएको बिदुरले आधारातसम्ममा त झण्डै हाफ बोतल signutrue रित्याइसकेका थिए । त्यसपछि के-के भयो के-के होसै भएनछ । साथीहरूले घिसार्दै ल्याएर घरमा लडाएछन् । भोलिपल्ट श्रीमतीले भन्दा पो थाहा पाएका थिए ।
बिहेको ड्रिन्कको हयाँङ्ग झण्डै २ दिनसम्म रहँदा टाउको फुट्ला जस्तो भएर रिङ्याएको थियो । सहन नसकी श्रीमतीलाई पसलबाट एउटा क्वाटर royal satage मगाएर स्वात्तै पारेपछि पो हातहरू पनि काँप्न छाडेको थियो ।
झम्म परिरहेको बेलामा तल्लाघरे श्यामे आएर "देउसी भैलो खेलेको पैसाले आज माथि डाँडामा पिकनिक कार्यक्रम छ । सबै गैसके तपाईंलाई ल्याउनु भनेका छन् । जाऊँ अंकल" भन्दा त बिदुरलाई के खोज्छस कानो आँखो भने जस्तै भएको थियो । कहाँ गएर अघिल्ल्लो दिनको ह्याँङ्गबाट छुट्कारा पाऊँ जस्तै भएको बेलामा श्यामेको निम्तोले त्यो बलै नभएको शरीरलाई बलजफ्ती डाँडा उकालेको थियो ।
पक्कै पनि ड्रिन्कको व्यवस्था त होला नै भन्ने आशामा बिदुरले कति छिटो छिटो पाइलाहरू बढाएको थियो ।
त्यस दिन कम्ता पनि रमाइलो भएको थिएन । त्यसमाथि झम झम दोहरीमा नाच्दै भोड्का र रम पिउँदा त अर्कै आनन्दको अनुभूति गर्न पुगेको थियो । बेलुका डाँडा ओर्लदाँ पो यता उता धसारिंदा पाइण्टको पछाडिपट्टि प्वालै परेको थियो । कसो कसो त्यो भुँडे जिउलाई हल्लाउँदै घर त पुर्‍याएकै थियो ।
भोलिपल्ट लगभग १० बजेतिर बिउँझदा बिदुरले झल्याँस भएर स्कुल सम्झन पुगेको थियो । स्कुल जान्छु भनेर उठ्न खोज्दा त शरीर त साथै दिदैन बा ! के गर्ने? फसाद परेको थियो । उठ्छु भन्दा शरीर ढुन्मुनिएर टेबलमाटाउको ठोक्किन पुग्ने । खान नखाएको त तीन दिन भैसकेछ । खाली रक्सीको भरमा शरीरले मात्रै के फुर्ती झिकोस बिचरा शरीरले । पिकनिकको ह्याँङ्ग तीन दिनसम्म रहँदा त बिदुरको होशहवासनै उडेको थियो ।
तीन दिनपछि तङरिएरस्कुल जान श्रीमतीले पकाएको तातो भात स्वाद नमानी नमानी (रक्सी र मासु धोक्ने बानी परेको थुतुनोलाई के मिठो हुन्थ्यो घरको भात?) खाएर हिडेको बिदुरलाई बाटैमा उही भान्जाले भेटाएको थियो ।
"ओहो मामा म तपाईंको मै आउन लागेको बाटैमा भेट भो ।" भान्जाले बडो रौनकताका साथ भन्यो ।
मामाको प्रश्न भुँईमा खस्न नपाउँदै भान्जोले फट्फटिंदै भन्यो, "मैले हिजो पारिको टार खेत बेचिदिएँ । अलिकति पैसा भाइसँग झ्याप पारेको थिएँ । आज राईनीको भट्टीमा जाऊँ ।"
"हैन, आज त जसरी भए पनि पुग्नै पर्छ स्कुल नत्र जागिर खुस्किन्छ मेरो त ।" निरीह प्राणी झैं मामा भन्दै थियो ।
निकै बेरसम्मको गलफत्तिपछि बिदुर बिस्तारै भान्जाको पछिपछि लाग्यो । खै राईनीको भट्टीमा के अदृश्य जादु थियो ।
"मामा कता कुन दुनियाँमा हराउनु भएको?" भान्जाको तिखो स्वरले मामा त्यो अतितको दुनियाँबाट झल्याँस्स हुन पुग्छ ।
"आज एक दिन मात्रै हो क्या भोलि मै पुर्‍याउन जाउँला बरु स्कुलसम्म " भान्जो निकै कर्तव्यनिष्ठ अभिभावक झैं भावुक बन्न पुग्छ ।
"हुन पनि हो नि आज एकदिन त हो नि । भोलिबाट जाउँला नि त्यो स्कुल त । जे पर्ला पर्ला ।" बिदुरको मनसपटलमा फेरि रक्सीको भूतले डेरा जमाउन पुगिहाल्यो ।
यो भूतले कहिले झ्वाप्पै छोप्छ भने कहिले छ्याङगै छोड्छ । बडो अचम्मको छ त्यो भूत झन त्यसमाथि सित्तैमा पिउन पाउने भनेपछि त कता कताबाट हाम्फालेर आइपुगिहाल्दो रहेछ ।
आज फेरि भान्जाको कुटिल बाणीबाट प्रभावित भएर बिदुर मामा उन्मात्त हुन पुग्छ । त्यो ६ ईन्च अग्लो हरियो बोतलको signature को कल्पनाले मामालाई बडो रोमाञ्चित अनुभूत गराउँछ । अघिसम्म काँपेका शरीरमा स्फुर्ति आउँछ । शरीर हल्का भएको महशुस गर्दै त्यो गजानन्द जस्तो शरीरलाई ओछ्यानबाट फुत्रुक्क उफार्छ । ऐना फुटेको दरज (रक्सी धोकेर तीन महिना अगाडि श्रीमतीसँग झगडा पर्दा आफैले फुटाएको)बाट कपडा झिकेर लगाउँछ ।
बिदुर झिल्के बनेर "ल जाऊँ त जाऊँ । आज एक दिन मात्रै हो । भोलिदेखि नखाने कसम ल । " भन्दै (यस्तो कसम त कति खाए खाए) बाहिर निस्किन्छ ।
भान्जा ठुलै लडाईं जितेको योद्दा झैं बहादुरीताका साथ मामाको पछाडि पछाडि (गमक्क फुलेर) लाग्छ ।
जादाँ जादैँ मामाले "ए बुढी आज मेरो लागि खाना नबना है" भन्न भ्याउँछ ।
श्रीमती वाक्क रहन्छे ।
बिहानसम्म जागिरमा जान्छु भन्दै गरेको मान्छे एक्कासी भान्जासँगै लागेको देखेर माइजू "मरिहालोस असत्ती मोरा फेरि आज पनि भाँडेर लगिहाल्यो मामा चाँहिलाई " भन्दै सराप्न थाल्छिन् । तर उनको सराप कसले सुन्ने ? छिनमै मामा भान्जा खोल्सापारि पुगिसकेका हुन्छन् ।
बुढी माइजू एक्लै फत्फताईरहन्छे ।
राजमार्गको छोटो हेराहेर
बिदेशको बेथा by Dev...
एकांकी ०६ - युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको दुःखद अवसान
मेरी आमा महान
एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ
बने नयाँ सरकार बन्छ
एउटा चराको प्वाँख
बुद्ध सम्बन्धी केही मुक्तकहरू
कथा साहित्यमा उदयपुरको मूल्याङ्कन
मायाको यो नाता कस्तो
लक्ष्मीस्मृति साहित्य समाजले १०६ औं लक्ष्मीजयन्ती सुसम्पन्न गर्यो
किन खोज्छौ त मबाट हाँसो
कविता शृंखला (दुख : ०९)
सम्झनाको दियो सधैँ बली रहेछ
तिम्रो नजर वाण भयो (दोहोरी गजल)
यो मन खारेर गयो